तपाईको बगैचा र सब्जी बगैंचाको लागि कम्पास कसरी बनाउने - चरण इककारो
मुख्य पृष्ठ >> बागवानी >> कम्पोस्टिंग >> कम्पोस्ट कसरी गर्ने
त्यहाँ छन् कम्पोस्टको धेरै कारणहरू। म घरेलु कम्पोस्टको बारेमा कुरा गर्दैछु। व्यक्तिहरूले मलाई यो गर्न नेतृत्व गरेका हुन्:
म जैविक फोहोरको ठूलो मात्राको फाइदा लिन्छु जुन फोहोरमा गयो।
बगैंचामा पातलो हालतमा जलाइने पर्खाइमा बाँधिएका काँटछाँट र काँटछाँटका बाँकी रहेका सबै चीजहरू फेरि प्रयोग गर्दछु।
म बगैचाको लागि कम्पोस्ट पाउँदछु र म भूमि सुधार गर्न प्रबन्ध गर्छु
चरण १. साइट र कम्पोजर छनौट गर्नुहोस्
ठाउँ र छनौट गर्नुहोस् कम्पोजर जुन तपाईंसँग जाँदै हुनुहुन्छ। मैले यसलाई २ अनारको बीचमा अस्थायी ठाउँमा राखेको छु, धेरै छायाँ भएको स्थान किनकि मैले बागबारीको क्षेत्र तयार गरेको छैन किनकि म यसलाई स्थायी रूपमा छोड्न चाहान्छु।
मलाई लाग्छ तपाईको कम्पोस्टर पहिले नै छ, यदि हैन भने तपाईले आफ्नो मनपरी गर्न सक्नुहुन्न एउटा मैले प्यालेटमा बनाएको छु, तर पनि यदि तपाईं यसलाई जटिल बनाउन चाहनुहुन्न भने, त्यहाँ मानिसहरू छन् जो यसलाई भूमिमा गर्छन् र यसलाई टार्पले छोप्दछन्।
अर्को विकल्प छ एउटा किन्नुहोस्.
कम्पोजर नभएकोमा नडराउनुहोस्, त्यहाँ मानिसहरू छन् जसले भूँईमा पातलो बनाउँदछ र यसलाई टार्पले छोप्दछ।
चरण २. पहिलो कोट
सिधा जमिनमा कम्पोस्टिंग सुरु गर्नुहोस्, कुनै जग नराख्नुहोस्। यस तरीकाले, यसले सृजना भएका लेचेटहरू ग्रहण गर्दछ।
पहिलो तहको लागि, तिनीहरूले ब्राउनबाट सुरू गर्न सिफारिश गर्दछन्, जसमा सुक्खा पातहरू, खैरो, आदि। मैले सुक्खा मेडलर पातहरूको एक तहबाट शुरू गरें।
पातहरू ओसिलो पार्नुहोस्, एक एक्सेलेटरमा पानी थप्नुहोस्, राम्रोसँग किनेको छ, नाइट्रोजनको आधारमा राम्रोसँग तयार गरिएको छ। तर आउनुहोस्, पानी पर्याप्त छ।
चरण Second. दोस्रो तह
अब देखी हामी एक स्यान्डविच बनाउन शुरू गर्नेछौं। हामी घाँस, बोटबिरुवा, फलफूल, तरकारीहरू, इत्यादिलाई छाँट्ने छौं। र हामी हरियो लेयर बनाउँनेछौं जुन हामी अर्को ब्राउन लेयरले कभर गर्नेछौं।
प्रत्येक तहको साथ तपाईंले चिसो गर्न पानी थप्नु पर्छ।
चरण the. ढेरलाई चिस्यान दिनुहोस्
म जस्तो केहि व्यक्तिले ढेरलाई चिसो पार्छ, कि पानी थप्दा थपिएको पानी थप्दछ, र अरूले यसलाई अन्तिममा गर्न रुचाउँछन्। त्यहाँ तिनीहरू पनि छन् जसले सबै चीजहरू मिलाउन तहहरू हटाउँदछन् र तिनीहरू भन्छन कार्बनको साथ नाइट्रोजन उत्पादनहरूसँग बढी सम्पर्कमा रहन प्रक्रिया बढाउँदछ।
चरण St. स्ट्याक जाँच
यो आवधिक रूपमा गर्नुपर्दछ। यो ढिलामा पुग्ने तापक्रम हेर्न कम्पोस्ट थर्मामिटर राख्नुपर्दछ, किनकि यो 60० र º० डिग्री सेन्टिग्रेडको बीचमा हुनुहुन्न।
यदि यो 70० भन्दा बढी छ भने यसको मतलब यो हो कि हामी नाइट्रोजन, हरियो सामग्रीको साथमा गइसकेका छौं र हामीले हावा हाल्नु पर्छ, अर्थात् पाइल हटाउनु पर्छ र खैरो वा कार्बन थप्नु पर्छ।
यदि यो 60० भन्दा कम छ भने, तपाईंले हेर्नुपर्नेछ कि यसले आर्द्रता अभाव छ कि छैन र यदि हामीले केही नाइट्रोजन तत्वहरू थपेका छौं र त्यो अवस्थामा हाम्रो ढेरमा थप थपेको छ।
मैले केहि पनि सुरू गरेको छैन, र मैले आफैंमा भएको कुराको फाइदा लिएँ, तर यो सत्य हो त्यहाँ उपकरणहरू छन् जुन हराएका छन् र मलाई लाग्छ कि म खरीदको अन्त्य हुनेछु वा उनीहरूको सम्भव भएमा। यी उपकरणहरू हुन्:
कम्पोजर। (तपाईं किन्न सक्नुहुन्छ यहाँ o यहाँ) मैले एउटा बनाएको छु, यसमा थोरै प्रयास समावेश छ र यसले भुक्तान गर्दछ, तर यदि तपाईं व्यावसायिक चाहानुहुन्छ भने उनीहरूले धेरै मोडेलहरू बेच्छन्।
फांसी (यसलाई किन्नुहोस् यहाँ) जसलाई काँटा वा काँटा पनि भनिन्छ, यो कम्पोस्टको ढेर मिलाउन काम गर्दछ जब यो विघटन भइरहेको छ र समाप्त कम्पोस्ट सार्न पनि गर्दछ।
एरेटर / मिक्सर (यसलाई किन्नुहोस् यहाँ) जसको नामले स As्केत गर्दछ, यो एक उपकरण हो जुन कम्पोस्टलाई मिक्स गर्न र यसलाई वातन गर्न प्रयोग गरिन्छ, यसले हामीलाई प्रक्रिया कसरी चल्दैछ भनेर हेर्नको लागि टेस्टिंग्स निकाल्न पनि अनुमति दिन्छ। यो एक धेरै सरल उपकरण हो।
कम्पोस्ट थर्मामीटर। (ESSENTIAL) यहाँ) कुनै श doubt्का बिना जुन मलाई सबैभन्दा धेरै याद आउँछ। यो एक लामो थर्मामीटर छ जुन हामी पाइल वा साइलोमा टाँस्यौं र हामी भित्र तापक्रम देख्छौं। तापमानलाई ध्यानमा राख्दै हामी जान्छौं कम्पोष्टि how कस्तो भइरहेको छ र यदि हामीले केहि गर्नुपर्दा, ओसिलो बनाउनु, घुम्नु, बढी कार्बन वा बढी नाइट्रेट इत्यादि थप्नु हो।
थ्रोटल। (खरीद गर्नुहोस् यहाँ) मैले यो इन्टरनेटमा देखेको छु, यद्यपि मैले यसलाई चलाएको छैन। त्यहाँ व्यक्ति छन् जसले एक एक्सेलेटर राख्छन्। यो घरमा पनि बनाउन सकिन्छ, हरियो जडिबुटीहरू, छाँट्ने अवशेषहरू, आदिलाई पानीमा १० दिन छोड्नुहोस्। रक्सीको बाफ भएपछि बियर प्रयोग गर्दा त्यहाँ पनीरहरू पनि छन् जसले पिसाब प्रयोग गर्दछ जुन एक्सिलरेटरको रूपमा नाइट्रोजनमा धेरै धनी छ।
म कम्पोस्टमा के राख्न सक्छु?
हामीले हाम्रो कम्पोस्ट ढेरमा राखेका सामग्रीलाई २ प्रकारमा विभाजन गरिन्छ। हरियो, जुन सबै चीजले यसलाई नाइट्रोजन र खैरो दिन्छ, जुन यसले कार्बन दिन्छ।
कम्पोस्टिing्ग एक प्रक्रिया हो जससँग हामी जैविक पदार्थहरूलाई कम्पोस्टमा रूपान्तरण गर्दछौं
हरियो (व्यावहारिक रूपमा केहि)
नपकाएको तरकारी र तरकारी स्क्र्यापहरू
हो सिट्रस पनि
मल, विशेष गरी hebivores को
सुख्खा छाँट्ने काम बाँकी छ
मसी मसी मुक्त कागज र कार्डबोर्ड
यदि हामीले सामग्रीको विघटन दरमा ध्यान दियौं भने हामी सामग्रीलाई types प्रकारमा विभाजन गर्न सक्दछौं, तर सधैं बिर्सनुहुन्न कि हरियो (नाइट्रोजन) + खैरो (कार्बन) को मिश्रण कम्पोस्टमा बन्छ।
ताजा पातहरू, घाँस क्लिपिंग्स, मल, र सबै जडिबुटी र बोटबिरुवा कोमल पातका साथ।
पराल, फलफूल, तरकारीहरू, झारहरू जसको काण्ड वा पातहरू कोमल हुँदैनन्, मल वा बेडले पराल समावेश गर्दछ, कोमल हेजको छाँट्ने।
धेरै ढिलो बिघटन
शाखाहरू, ईन्गेलहरू, फलफूलका ढु stones्गाहरू, नट शेलहरू, काठ शेभिंगहरू, भूसा।
समयमै प्रयोग गर्न
खरानी, ​​अखबार, गत्ता
कुन अनुपात प्रयोग गर्नु पर्छ?
तपाईले कसलाई पढ्नुभयो यसमा निर्भर गर्दछ कि उनीहरूले 40०-60०, -०-50० वा -०-50० डोपविडिंगको कुरा गर्छन् जुन हामी यस गाईडमा ध्यान दिएका छौं 60०-40० को सिफारिश गर्दछ, त्यो हो, %०% हरियो पदार्थ र %०% खैरो, यो। तापक्रम धेरै बढ्नेछ, र हामीले यसलाई बढि नदिन सावधान हुनुपर्छ।
त्यहाँ मिथ्याहरु का एक धेरै छन् कि Dowling द्वारा debunked छन्।
Citrus। धेरै व्यक्तिहरूले सोच्दैनन्, तर तपाईं ढेरमा सिट्रस थप्न सक्नुहुन्छ। मात्र यदि तपाईले धेरै थप गर्नुभयो भने pH लाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
जग्गा। जरा बिरुवाहरु को उपयोग मा कुनै समस्या छैन
बीउ बिरुवाहरु। उस्तै कुरा हुन्छ, धेरै व्यक्तिहरू विश्वास गर्छन् कि तपाईंले बिउहरू भएको कम्पोस्ट बिरूवाहरू खानु हुँदैन, किनभने तिनीहरू कम्पोस्टमा रहनेछन् र अंकुरण हुनेछ जब हामी यसको प्रयोग गर्छौं। तर यो त्यस्तो छैन।
यदि कम्पोस्ट राम्रोसँग गरिएको छ भने, यो 60०-º० डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रममा पुग्छ, जरा मार्न र बीउहरूलाई निष्क्रिय गर्न पर्याप्त भन्दा बढी। नतिजा कम्पोस्टको प्रयोग गर्दा हामीलाई केहि समस्या हुने छैन
मेरो पहिलो कम्पोस्ट
मैले यो पहिलो कम्पोस्टि see्ग कागजात गर्दछ, म के गर्छु भनेर हेर्नको लागि र यदि यो खराब हुन जान्छ भने म अध्ययन गर्न सक्षम भएँ जहाँ म असफल भएको छु।
म १०-२25-२०२० लाई काठको प्यालेटबाट कम्पोस्ट बनाउन सुरू गर्दछु र सुक्खा मेलेलर पातहरू र सुख्खा जडिबुटीहरू खरानी राख्छु। हरियो सामग्री, घाँस, फलफूल र तरकारीको अवशेष, कफी मैदान र हाम्रो खरायो को शौचालय कि यसको उत्सर्जन बाहेक कागज extruded छ कि यो केहि पेशा शोषण गर्छ र गन्ध छैन। म प्रत्येक लेयर पानीले भिजेको छु।
म रिफिल गर्न जारी राख्छु र ११-११-२०२० मा म फलफूल र तरकारीको सानो योगदानको साथ कागज र खरायो उत्सर्जनको साथ आधा कम्पोजर भर्दछु, तर विशेष गरी औबरजिन बिरुवाहरूसँग जुन छिमेकीले हटाएको थियो र जलाउन लागेको थियो र मैले तिनीहरूलाई राखेको छु। यो ढेर एकदम सुक्खा छ र म अधिक प्रशस्त मात्रामा पानी दिन्छु, म नाइट्रोजन थप्न र प्रक्रियालाई छिटो बनाउन मलको गोलीसँग पानी राख्दैछु।
-8-११-२०२० म खरायो कागज र किचन स्क्र्याप र खैरो को एक तह थप्छु।
११-१-18-२०२० मैले हटाउने र आर्द्रता बढाउने जडिबुटीहरूको साथ भरिँदै, मलाई सबै कुरा राम्ररी मिलाउनु पर्छ।
विभाग कम्पोस्टिंग टिकट नेभिगेसन
1 कम्पोस्ट किन?
2.1 चरण १. साइट र कम्पोजर छनौट गर्नुहोस्
2.2 चरण २. पहिलो कोट
2.3 चरण Second. दोस्रो तह
2.4 चरण the. ढेरलाई चिस्यान दिनुहोस्
2.5 चरण St. स्ट्याक जाँच
3 कम्पोस्ट उपकरणहरू
4 म कम्पोस्टमा के राख्न सक्छु?
6 मेरो पहिलो कम्पोस्ट